ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई-पासपोर्ट वितरण सुरू ! - jagritikhabar.com
ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई-पासपोर्ट वितरण सुरू !
आजदेखि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ई-पासपोर्टका लागि आवदेन संकलन र वितरण गर्न सुरु भएको छ । यसअघि राहदानी विभाग (त्रिपुरेश्वर) बाट ई-पासपोर्ट वितरण भइरहेकोमा अब ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि सेवा प्रारम्भ भएको हो ।
‘उपत्यकापछि अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि ई-पासपोर्ट वितरण सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । सेवाग्राहीको सहजताका लागि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै आवेदन दिन मिल्ने र वितरण पनि त्यहीँबाट गर्ने योजना विभागले ल्याएको उनले बताए ।
विभागमा ६६ पृष्ठको राहदानीको लागि निवेदन दिंदा २० हजार राजस्व लाग्छ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा छुट्टै दस्तुर तोकिएको छ ।